Uyifaka njani iMizobo kwi-PowerPoint 2019 iSilayidi
Enye indlela yokuphucula ukubonakala kwePowerPoint 2019 ntetho kukubandakanya imizobo kwisilayidi esinye okanye ezingaphezulu. Imizobo ingafundisa, enje ngetshathi ebonisa iziphumo zentengiso, okanye ukuhombisa, njengobuso bekhathuni obunoncumo obugxininisa iindaba ezilungileyo zokubonisa.
Iindidi ezintathu eziqhelekileyo zemizobo onokongeza kuyo kwi-PowerPoint slide elandelayo:
Iifayile zemifanekiso: Ibonisa imifanekiso eqingqiweyo yobugcisa okanye imifanekiso osenokuba uyigcinile kwihard drive yakho, njengeefoto ezivela kwikhamera yakho yedijithali
Iitshathi: Ibonisa ibha, ikholamu, umgca, ipayi, kunye nezinye iintlobo zeetshathi
Ubugcisa beLizwi: Ibonisa isicatshulwa njengombhalo onemibala
Ukubeka iifayile zemifanekiso kwisilayidi sePowerPoint
Ukwenza iprizenteyishini, ungongeza imifanekiso osenokuba sele uyigcinile kwikhompyuter yakho. Ukongeza umfanekiso kwisilayidi, landela la manyathelo:
Cofa isilayidi (nokuba ngowesiqhelo okanye umbono we-Outline) ofuna ukongeza kuwo umfanekiso.
Kwiqela leMifanekiso, cofa i icon yeMifanekiso.
Ibhokisi yencoko yababini yokuFaka iyavela. Kuya kufuneka ukuba utshintshe iifolda okanye uqhuba ukuze ufumane ifayile yefayile oyifunayo.
Khetha ifayile yemifanekiso oyifunayo uze ucofe Vula.
IPowerPoint ibonisa umfanekiso owukhethileyo kwisilayidi esibonisiweyo ngoku. Kuya kufuneka wenze ubungakanani kwakhona okanye uhambise umfanekiso wakho.
Ukubeka ikliphu yobugcisa kwisilayidi sePowerPoint
Iiklip zobugcisa zinemizobo efumaneka kwi-Intanethi. Ukongeza umfanekiso wobugcisa bekliphu kwisilayidi, landela la manyathelo:
Kwiqela leMifanekiso, cofa i icon yeMifanekiso eKwi-Intanethi.
Iwindow yemifanekiso ekwi-Intanethi iyavela, ikunike ukhetho lokuchwetheza inkcazo yemifanekiso ukukhangela ubugcisa beklip ngokusebenzisa injini yokukhangela ye-Bing.
Udinga uqhagamshelo kwi-Intanethi ukukhangela ubugcisa beklip ngomyalelo we-Intanethi weZithombe.
Cofa kwibhokisi yokubhaliweyo ye-Bing uze uchwetheze igama elichaza uhlobo lomfanekiso ofuna ukulufumana.
Iwindow ibonisa yonke imifanekiso ye-clip-yobugcisa enokuyifumana ehambelana negama elichazayo olichwetheze kwiNyathelo 4.
Khetha umfanekiso-wobugcisa ofuna ukuwusebenzisa kwaye ucofe Faka iqhosha.
I-PowerPoint ibonisa umfanekiso owukhethileyo kwisilayidi sangoku. (Kuya kufuneka ukuba ushukumise okanye wenze ubungakanani kwakhona bomfanekiso.)
Lumka xa usebenzisa imifanekiso yobugcisa obukwi-Intanethi. Ngokufanelekileyo, khangela imifanekiso echazwe ngokucacileyo njengommandla woluntu. Ngaphandle koko, unokufuna ukufumana amalungelo okusebenzisa umfanekiso othile ngokunxibelelana nomnini womfanekiso.
Ukwenza i-WordArt kwi-PowerPoint 2019
I-WordArt ibonelela ngenye indlela yokubonisa isicatshulwa. Ngokungafaniyo nesicatshulwa esiqhelekileyo onokufomatha, i-WordArt ikuvumela ukuba wenze isicatshulwa esijolise kwimifanekiso ukuze usisebenzise njengezihloko kugxininiso olongeziweyo. Ukwenza i-WordArt, landela la manyathelo:
Cofa isilayidi (nokuba ngowesiqhelo okanye umbono we-Outline) ofuna ukongeza kuyo i-WordArt.
Kwiqela elibhaliweyo, cofa i icon ye-WordArt.
Imenyu ye-WordArt iyavela.
Cofa isitayile seWordArt oza kuyisebenzisa.
I-PowerPoint ibonisa ibhokisi yokubhaliweyo ye-WordArt kwisilayidi sangoku.
Ibhokisi yokubhaliweyo yeWordArt ikwabonisa iNkqubo yokuFomatha izixhobo zeTebhu.
Ngaba iitamponi zinokubangela i-bv
Cofa kwibhokisi yokubhaliweyo ye-WordArt kwaye uchwetheze isicatshulwa.
Isicatshulwa se-WordArt asiveli xa ujonga izilayidi kwimbonakalo yoLwandlalo.
Ukufakwa kwesikrini kwiPowerPoint 2019
Ngamanye amaxesha unokufuna ukufaka umfanekiso wescreen sekhompyuter ukubonisa indlela esebenza ngayo inkqubo okanye ukubonisa ukuba iwebhusayithi yomntu okhuphisana nayo ikhangeleka njani. Ukuba ufuna umfanekiso-skrini, iPowerPoint inokungenisa konke okanye inxenye yesikrini.
Ukuthabatha umfanekiso weskrini, landela la manyathelo:
Cofa isilayidi (kuyo nayiphi iSilayidi okanye uMboniso we-Outline) ofuna ukongeza kuyo umfanekiso weskrini.
Kwiqela leMifanekiso, cofa i icon yeScreen.
Imenyu iyavela, ibonisa zonke iiwindows ezivulekileyo ngoku.
Cofa umfanekiso-skrini ofuna ukuwubamba.
I-PowerPoint ibonisa umfanekiso weskrini kwisilayidi sangoku.
Ukuba ukhetha uQhekeko lwekhusi ukusuka ezantsi kwimenyu, ungatsala imouse ukukhetha isahlulo sesikrini ukuze usibambe kwaye usigcine kwisilayidi sakho.
Ukuhlaziya ubungakanani, ukuhambisa kunye nokucima imifanekiso eqingqiweyo kwiPowerPoint 2019
Xa usongeza imizobo kwisilayidi, kungafuneka uphinde ubenobungakanani okanye ubahambisele kwenye indawo. Ukuphinda uhlaziye umfanekiso ocacileyo, landela la manyathelo:
Cofa umzobo (umfanekiso, ikliphu yobugcisa, umfanekiso weskrini, okanye i-WordArt) ofuna ukuyenza ubungakanani kwakhona.
Umboniso wePowerPoint ujikeleze into oyikhethileyo.
Hambisa isikhombisi semouse ngaphaya kwesiphatho.
Isalathiso sempuku sijika sibe lutolo olukhombe-mibini.
Bamba iqhosha lasekhohlo le mouse kwaye urhuqe imouse.
IPowerPoint yenza ubungakanani kwakhona bomfanekiso owukhethileyo.
Khupha iqhosha lasekhohlo le mouse xa wonwabile ngesayizi entsha yomfanekiso wakho wegraphic.
Ukuhambisa umfanekiso ocacileyo, landela la manyathelo:
Hambisa isikhombisi semouse ngaphaya komphetho womfanekiso ofuna ukuwuhambisa.
Imouse ijika ibe yitolo enendlela ezine.
IPowerPoint ihambisa umfanekiso ocacileyo.
Khupha iqhosha lasekhohlo le mouse xa wonwabile ngendawo entsha yomfanekiso wakho wegraphic.
Emva kokuba ungeze umfanekiso ocacileyo kwisilayidi, usenokugqiba kwelokuba uwucime. Ukucima umfanekiso ocacileyo, landela la manyathelo:
Cofa umfanekiso ocacileyo ofuna ukuwucima.
Umboniso wePowerPoint ujikeleze imifanekiso oyikhethileyo.
I-PowerPoint isusa imifanekiso oyikhethileyo.
Imizobo ejikelezayo kwi-PowerPoint 2019
Unokufuna ukujikeleza imifanekiso enemifanekiso yeziphumo ezibonakalayo. Ukujikeleza imifanekiso okanye ukuyifaka ngokuthe nkqo okanye ngokuthe tye, landela la manyathelo:
Cofa umfanekiso ocacileyo ofuna ukuwujikeleza.
Isibonisi sePowerPoint sijikeleze umfanekiso wakho kunye nesiphatho esijikelezayo esiluhlaza.
Hambisa isikhombisi semouse ngaphezulu kwesiphatho esijikelezayo.
Isalathisi sempuku sijika sibe lutolo oluyisetyhula.
Bamba iqhosha lasekhohlo le mouse kwaye ususe imouse.
IPowerPoint ijikelezisa umfanekiso ocacileyo.
Ukuba ubamba isitshixo seShift ngelixa utsala imouse, unokujikeleza umfanekiso kwinqanaba elinyukayo le-15.
Khupha iqhosha lasekhohlo le mouse xa wonwabile ngokujikeleza komfanekiso.
Ukubeka izinto kwiPowerPoint 2019
I-PowerPoint iphatha imizobo kunye neebhokisi zeetekisi njengezinto onokuhambahamba kuzo kwisilayidi. Ukuba uhambisa into ngaphezulu kwenye, inokuthintela inxenye yento enye.
Into eyahluliweyo inokufihla enye into.
Xa enye into igubungela enye, iPowerPoint ithathela ingqalelo into yokuqala ukuba ngaphezulu kwaye enye into (leyo ifihliweyo) ibe sezantsi. Ngokuhambisa izinto ukusuka phezulu uye ezantsi (okanye ngokuchaseneyo), unokwenza iziphumo ezizodwa ezibonakalayo (okanye gubungela iindawo zezinye izinto ngempazamo).
Ukuhambisa umfanekiso ocacileyo uye phezulu okanye ezantsi xa ulayishwe ngaphezulu kwenye into, landela la manyathelo:
Cofa umfanekiso ocacileyo ofuna ukuwuhambisa.
Isixhobo seFomathi yeZixhobo zeFoto siyavela.
Cofa kwiTebhu yefomathi.
Kwi qela lokuCwangcisa, cofa indawo ethi 'Yisa Phambili' okanye 'Thumela umva'.
IPowerPoint ilungelelanisa ukubekwa kwemifanekiso eqingqiweyo.
Unokucofa ekunene kwinto kwaye ukhethe ukuZisa okanye ukuThumela umva mva.
indlela yokongeza izixhathisi kuthotho
iipilisi zesulfameth tmp ds
yintoni umthi ojikelezayo
ukutya okungabangeli igesi kunye nokuqunjelwa